छोराको पर्खाइमा १४ सन्तान ! जिवित रहेका पनि छोरी मात्र « Deshko News
छोराको पर्खाइमा १४ सन्तान ! जिवित रहेका पनि छोरी मात्र
लिबाङ, रोल्पा, फागुन ३०
एक छोरी र तीन भाइ छोरा भने जीवित रहेनन् जसका कारण सुन्तलीले रातदिन यातना सहनुपर्यो । छोरा नपाएको र पाएका छोरा मारेको भन्दै उहाँका श्रीमान्ले मदिरा सेवन गरी रातदिन कुटपिट गर्ने, पेटभरि खानलाउन नदिने तथा घर निकाला गर्ने जस्ता सजाय दिइरहनुभयो । तर पनि सुन्तली जसोतसो जीवित छोरीको मुख हेरेर दिन गुजार्न बाध्य हुनु परेको थियो । उहाँका अनुसार छोराहरु जीवित नरहेपछि छोराको बाबु बन्ने सपना पूरा गर्न सुन्तलीका श्रीमान्ले सौता हालेका थिए ।
सुनारकी छोरीका अनुसार पितृसत्तात्मक सोच र चिन्तनका कारण श्रीमानले जे गरे पनि हुने मान्यता कायमै रहेको हँुदा सुनारले दोस्रो बिहे गर्नुभएको थियो र आफूखुशी कान्छी श्रीमतीलाई पन्छाएर जेठी श्रीमतीसँग बस्दै आउनु भएको छ ।